गाउँपालिका अध्यक्षलाई आधा कार्यकाल घर्केपछि कांग्रेसको प्रशिक्षण – Khabar Silo
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि चुनाब सकिएको दुई वर्षपछि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा दुईदिने प्रशिक्षण शुक्रबार भक्तपुरको बोडेमा शुरु भएको हो ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र स्थानीय तहका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष जिताएका गाउँपालिकाका सभापतिहरूलाई प्रशिक्षणमा आमन्त्रण गरिएको छ ।२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ४६० गाउँपालिका मध्ये कांग्रेसले १६१ अध्यक्ष र १४१ उपाध्यक्ष जितेको थियो ।
दुई वर्षपछि बल्ल प्रशिक्षण
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ बैशाखमा सम्पन्न भएको थियो । तीन प्रदेशहरूको ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष भइसकेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारमा शून्य प्रतिनिधित्व रहेको कांग्रेसले नगरपालिका र महासमिति सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिएपछि बल्ल गाउँपालिका जनप्रतिनिधिका लागि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रशिक्षण ढिलो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मोरङको केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो छ । तर, ढिलो भयो । यस्तो कार्यक्रम एक वर्षभित्रै गरिसक्नुपर्थ्यो ।’
नेकपाले आफ्ना वडातहसम्मका प्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण दिइसक्दा आफ्नो पार्टीले बल्ल सुरु गरेको कार्कीले बताए ।पार्टी उपसभापति समेत रहेका प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधि भने पार्टीको विधानलाई संघीय संरचनामा ढाल्दा प्रशिक्षण चलाउन ढिलो भएको बताउँछन्। महासमिति बैठक ढिलो हुनुको असर प्रशिक्षणसम्म आइपुगेको उनको भनाइ छ ।
प्रशिक्षणको ‘म्यानुअल’मा राज्यको संरचना र संविधानका आधारभूत तत्व, सरकारको पर्फमेन्स, बजेट तर्जुमा, न्याय सम्पादन, अनुभव आदान–प्रदान जस्ता विषय राखिएका छन् ।
केन्द्रीय नीति प्रतिष्ठान प्रमुख निधि, कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहाल, तारानाथ दाहाल, हरिहर विरही, डा. सूर्य ढुँगेल, डा.गोविन्दराज पोखरेल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, रामचन्द्र पोखरेल, राजु नेपाल लगायत प्रशिक्षक छन् ।
पूर्ण वैचारिक भन्दा पनि व्यवहारपयोगी विषयमा प्रशिक्षणमा जोड दिइएको आयोजकको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिहरूले दुई वर्षमा भोगेका समस्या सुनेर त्यसको समाधान खोजिने प्रतिष्ठानका प्रमुख निधि बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक हिसाबले यो सेमी–पोलिटकल प्रशिक्षण हो ।’
प्रशिक्षण सकिएपछि सहभागी जनप्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिसँग जनही ५ हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क उठाएर सुरु गरिएको प्रशिक्षणबाट प्राप्त प्रमाणपत्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्दा काम लाग्ने आयोजकको भनाइ छ ।
कांग्रेसका गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखको प्रशिक्षणमा सत्तारुढ नेकपाले स्थानीय तहमा गरिरहेको व्यवहारका विषयमा पनि छलफल हुने सहभागीहरुले बताएका छन् ।
सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता राई संघीय र प्रदेश सरकारले नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कुरामात्रै सुन्ने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जति महत्वपूर्ण भए पनि हाम्रो कुरालाई प्राथमिकता दिँदैनन् ।’
गाउँपालिकाका लागि विनियोजित बजेट पनि सत्तारुढ पार्टीको ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार वितरण हुने गरेको र न्यायिक समितिलाई आवश्यक बजेट नदिइएको उपाध्यक्ष राईको गुनासो छ । थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेकपाका जनप्रतिनिधि छन् भने उपाध्यक्षमा कांग्रेस ।
संघ र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेको दलबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी पठाउँदासमेत विभेद गर्ने गरेको सम्बद्ध जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति रहिसकेका केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्की कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई असहयोग गरेको सुनाए ।
कर्मचारीको एक–एक हिसाब राख्छौं : देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अटेर गर्ने कर्मचारीको एक–एक हिसाब राख्ने बताए । प्रशिक्षणको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै देउवाले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीले कांग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको बताए ।
नेकपाले जितेको स्थानीय तहमा भन्दा कांग्रेसले जितेकोमा राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो ।कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले स्थानीय तहमा राम्रो काम गरे मात्र पार्टीले जनविश्वास आर्जन गर्न सकिने धारणा राखे ।
भक्तपुरको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहँदा बाहिर कांग्रेसका झण्डा फहराउनुका साथै सरकारी गाडी लामवद्ध देखिन्थे ।
सिमरा : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन्। बाराको सिमरामा शुक्रबार आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता केसीले तीन तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा सुशासनभन्दा पनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको आरोप लगाए। तीन तहको सरकार, प्रशासन र न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढिरहेको आरोप लगाउँदै नेता केसीले यो दलदलबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न खबरदारी गर्न […]